32 sano kadib, ku xir fiilooyinka, xirmooyinka - Geofumadas
Abriil, 2013 Leisure / waxyi
Safarkan fasaxa xagaaga wuxuu ahaa mid ka badan uun buufiska walaaca. Aniga kaliya maahan, waxay aheed inta kale ee qoyskeyga ah oo ila socotay.
Mararka qaar isbarbar dhiga ay dunta isku xirmaan ayaa umuuqda mid dhab ah oo waqti ku qaadanaya milicsiga. Kuleylka xagaaga iyo rabitaanka ah in lagu aado in lagu maydho webiga ayaa jaray melancholy ee «halkan ayaa ahayd,, Inyar laakiin ka dib ku dhawaad ​​shan saacadood oo safar ah, oo jiifa sagxad ayaan ka helay durdur isla markiiba, pixel saxda ah ku dhowaad la sax ah in kaliya Plex.Earth waad sameyn kartaa
Halkani waa meeshii aan ku dhashay, waxaanan ku soo qaatay carruurnimadaydii hore. Kalabar wixii uu ogaa ee uu rumaystay waxay ahaayeen sixir; si aad u badan oo mararka qaarkood waxaan u maleynayay inaysan waligeed dhicin:
Mañanitas-ka oo aadaya meeshii loo yaqaan 'potrerito' ee aabbahay uu ku lisay lo'da; waxaan ka qaadnay xumbo baaldi caano iyadoo la adeegsanayo caleen guava ah. Gadaal ahaan mistiricuco ayaa wali ka heesaya baroor cad oo ku saabsan digaagga aan la cuni karin habeenkii iyo arrimaha jacaylka ee lumay waaberigii.
Markaa waxaan cuni lahaa xoogaa miro la dubay oo hadhuudh ah, oo cusub, kulul, kuna kala qaybsan saxan caano cusub. In yar oo milix ah ayaa siisay iyaga dhadhan aan caadi ahayn ... in kasta oo markaan u sheego carruurtaydu mar kale ayay igu arkaan indho hoos u dhacaya.
Shaqaalaha aabbahay ayaa qadada u yimid duhurkii; mid ka mid ah wuxuu ahaa Don Jerónimo (Chombo), midka ugu buuqa badan. Waxay dili jireen digaag, qoorta ayeey ka gooyn jireen meeshaas iyagoo ku tuuray meesha waxna kama maqnayn «tortillas dheeraad ah oo loogu talagalay dona blanca«. Xuquuqda marinkaas ayay miis dheer u saareen iyaga, kahor intaan loo helin jaranjarada cagaaran ee macquulka ah ee qaadaysa dhadhanka darbiyada cadcad ee la caddeeyey.
Galabtiina waxaa yimid adeerkeed Aunt Leda inay ciyaaraan; Materinerero markay soo socdaan oo ay socdaan, ka dib bay gabyeen mid cabsi i gelisay «Doñana halkan ma joogin, waa xayawaankiisa»Tan markii lacagta caymisku timid. Markuu Wil yimaadona waxaan ku ciyaari lahayn dusha sare ee barxadda, ama miraha cashew ee god ku yaal geedka Tamarindo hoostiisa ... ilaa aynaan arki karin mar dambe mugdiga iyo markii guacos ay si lama filaan ah u bilaabeen inay ka heesaan halkaas albaabka agtiisa.
Waxaan aadi lahaa iskuulka subaxdii, waxaan bixi jirnaa xilli hore oo ku dhawaad ​​saacad oo socod ah ayaan ku tagi doonaa magaalada la yiraahdo La Laguna waan imaan doonnaa. Maalin badhkeed oo iskuul leh nuurad madow oo ku xardhan gidaarka iyo masaxa suufka gacanta lagu sameeyo. Soo noqoshada ayaa aheyd mid dhaqso badan maxaa yeelay waxaan ka soo degaynay buurta, anagoo qaylinayna oo la orodnay asxaabtii guryahooda ku sugnaayeen ilaa iyo Don Toño Blanco ilaa aan ka soo gudubnay toggii uu Wil ku sagootiyay. Waana sidaan guriga ku tagnay. Dhowr tortilla oo ay ku jiraan digir iyo subag ayaa qado ahaa; Galabtii inteeda kale waxay ahayd in la aado si loo keeno lo'dii daaqday Plan del Castaño, waxaan ku maydhnay gebi ahaanba qaawanaa in cabbaar ah barkadda La Cachirula ka dibna waxaan u fuulnay jaranja lo'da ilaa La Sabaneta.
Tani waxay ka dhacday dugsiga geeridii awoowgii, kaasoo ka hirgaliyay iskuul bilaash goobtaas oo subaxdii ka shaqeeya halkaasoo carruurta ka timaadda magaalooyinka u dhow ay si bilaash ah ugu qaataan fasalka lixaad. Galabnimadii, rugtiisii ​​caafimaad ayaa shaqeyneysay, halkaas oo dadku u xaadireen inay ka helaan adeegyo dhakhtarka kaliya ee boqollaal kiilomitir ku wareegsan.
Xiriirka ayeeyada ayaa ahaa mid la yaab leh. Inta badan ilmaadeeraday ayaa wax la bartay, sheekada aan la daabicin ee "El Cuco" waxay sheegeysaa in bukaanada masaafada qaar qaba ay ku dhinteen wadada ama ay horayba u bogsadeen markay yimaadeen, mana u soo laabanin kaliya xiisaha ay u qabaan inay la kulmaan dhakhtar runta Dib ayey ula yaabeen markay ogaadeen inuusan helin wax mushaar ah iyo canaanta canugga uusan u dirin dugsiga sanadkan.
Ka dib waxaa yimid dagaalkii sokeeye oo si lama filaan ah dunta ayaa ugu jabtay waxaan u maleynayay inaan fahmay sideedii sano ee gaabneyd. Waxaas oo dhami waxay bilaabeen markii kooxdii ugu horreysay ee qaran dumis ahi ay soo mareen, iyagoo dhabarka ku sita boorsooyin cagaaran iyo koofiyad cagaaran oo saytuun ah; laba ka mid ah oo leh gar oo u dhiibtay sidii reer Cuba, Nicaraguan, ama taageerayaal qaabkaa ah; in kasta oo aan u arko inay ahayd uun koox doqomo ah. Waxay qaateen aabbahay 22 qori, toorreyda gacanta ku qabta lafta deerada waxayna ka tageen dareenkaas ah inay kujiraan liis aynaan inta badan wadaagi jirin.
Halkaas ayay rasaasta iyo bambooyinku ka dhacayeen meel kasta, saacadaha maalintii oo dhan, laakiin waxay uga sii dartay galabtii markii diyaaraduhu duqeeyeen tuulooyinka Ceel Tule, Las Raices iyo godadka Ceel Burillo. Si lama filaan ah, maalin kasta, oo ka yimid dhammaan tuulooyinka ku yaal hareeraha Webiga Araute, qaxooti ayaa yimid guriga, raggooda iyo carruurtooduba waxay ku biireen jabhadda Farabundo Martí. Hooyooyinku waxay umuuqdeen kuwa aan ladaadin, oo leh timo isku dhafan, qaar koodna kabo yar, oo fiirinaya daaqadaha waqtiga uu waardiyuhu imaanayo si uu u dilo.
Waxaan ku noolaan jirnay walaac la dagaallama alaabaheena caruur faro badan oo maalin walba timaadda, kuwaasoo uriya wax aan caadi ahayn, wax yarna hadlay oo u ooyay wax walba. Kadib way baxeen, iyagoo eey iyo shandado ku reebay bakhaarka iyaga oo wata balanqaad ah inay soo noqonayaan.
Ugu dambeyntiina waxaa jiray eeyo aad u tiro badan oo hooyaday ku guuleysatay inay siiso sun iyaga oo ku marmarsiyoonaya inay ka fogaadaan cudurrada faafa. Laakiin runtu waxay tahay inaanu jirin wax cunto ah xitaa annaga, oo leh dad badan oo kale afkooda inay quudiyaan, oo leh cashuur dagaal oo badan oo la bixiyo; hooyaday waxay kudhameysay inay sameyso kudhowaad boqol miisaan oo tortilla ah maalintii si ay u quudiso kaamka ka sareeya guriga, hortiisa geedka Nance.
Waxay ahayd wax xiiso leh inaan ku safro isla wadadan, oo 40 sano aan kujiray cirro. Ka dib markaan akhriyay buugga Siete Gorriones oo aan arkay inaan ku sigtay inaan qayb ka noqdo xasuuqii El Rosario halka Waxaan u qaxnay Honduras, waxyaabo badan ayaa macno samaynaya. Sheekadu waxay ku xirmaysaa, aragti kale. Dadku waxay fahmeen waxyaabo aan macquul ahayn sida dagaalkaas oo uusan u dhici karin laakiin sidoo kale waxay ahayd lama huraan. Dhamaadka khadadka waxay cadeeyeen inuu ahaa dagaal udhaxeeya dadka saboolka ah, halka hogaamiyaasha hada dalka dibadiisa ka jooga ay yihiin milyaneero iyo milkiileyaal boqortooyooyinka bangiyada; halka buuraha aysan macquul aheyn in lagu laabto maxaa yeelay wadooyinka ayaa lumay.
Aragtidayda dhageysiga waxa ay u maleynayaan kuwa halkaas ku nagaaday, waxaan la hadlay dad badan oo aan ka baqeyn inay runta sheegaan. Waan awooday inaan aado madxafka kacaanka, halkaas oo aan ka maqli karo codka hage oo ahaa jabhad ilaa iyo markii uu 12 sano jiray… taariikhdu waxay leedahay macno kale, oo ah dhibaato soo gaar ah.
Mar dambe ma istaahilahay inaan dareemo nafsadeyda ah sababta ay u qabsadeen dayrka meesha aan ku ciyaaray marbooyinka, ama sababta ay u qaadeen aabahayga adigoon ogolaansho weydiisan.
Markaad maqasho nuuca qof aan waligiis waxba qabin riyada dagaalka mooyee. Waxaan ku qancay in halganka hubeysan uusan wax badan uga tageynin, marka laga reebo hanka inuu u halgamay himilo. Waxaad garwaaqsantahay in bini aadamku aad u adagyahay waxkasta oo aan qabanayno. Halyeeyada qaar, kuwa kale waa inkaaran yihiin ... sida rabbaaniga ah sida aan u nahay aadanaha.
Dareenka ayaa isdhaafiya ... Waxaan ka qoomameynayaa 7da inaadeer ee iga lumay, 4 adeerkii, iyo 6 eheladoodii kale ee fog.
Wuxuu ka qoomameynayaa inuu lumiyay kaliya 3 walaalo ah, aabihiis, iyo in kabadan 11 qaraabo dhow. Waxa uu ka xun yahay in walaashiis ay curyaan ka noqotay xabbadda dhakada, in adeerkiis uu ka naafo yahay fuulista miinada, in afar ka mid ahi xitaa aasi kari weyday maxaa yeelay qabrigoodu ma muuqdo, in laba carruur ah oo adeerkiis ah la qalloociyay hawada toorreyda loo yaqaan 'bayonet' iyo in ilma adeerradood ka weyn oo 10 jir iyo 12 jir ah la kufsaday ka hor intaan la dilin. Kadib, wuxuu mid mid ugu sheegayaa sida ay saaxiibbadiis, saaxiibbadiis maleeshiyada uga dhinteen ... xagga hoose ee Volcancillo, Cerro
Perquín, oo ah farcankii Ojos de Agua, oo ku yaal dhaadhaca Azacualpa, Chorreritas, kaniisadda El Rosario, Pando Hill, Isgoyska Mazada, iyo La Guacamaya, oo ku taal San Vicente, Usulután ...
Taasi waa sida ay nolosheennu u xiiso badan tahay. Markay sannaduhu dhammaadaan, xusuusteenu si otomaatig ah ayey u jajabisaa oo dhadhammo xun u dirtaa asalka. Kadib waxay soo saartaa daqiiqadaha ugufiican waxayna kuxirantahay silsilado soo baxa si ay nooxasuusiso inay sidaas un ahayd. Horey ayaa loogu hagaajiyay jaangooyooyinka, waxay soo noqotaa marwalba oo aan jiifano jiifka, anaga oo maskaxda ku haynayna muuqaalo u muuqda qayb kamid ah sheeko, kuna qasaysa farxada kuwa hada noogu dhow ay hada soosaaraan.
Iyada oo farqiga udhaxeeya 32 sano ka dib, ma jiraan wax khilaaf ah.
Waxaan ahaa qof mudnaan leh oo uu neceb yahay. Waqtigu wuxuu i siiyay xididdo horumar leh illaa aan u beddelay injineernimada xirfad bulsho.
Isaga, caasinimo doonaya inuu u dhinto sababtiisa. Hadda ogsoonow inuu badbaado u yahay wax ka badan mucjiso.
Taasi waa sida caafimaadku u yahay in lagu xiro mawduucyada wixii la soo dhaafay, illoobo ciil-qabka iyo wareegyada dhow. Sameynta xisaabta, waxaa jira casharro badan oo ka dambeeya meeshan ...
By habka, meesha waxaa loo yaqaan Zatoca. Sidee ZatocaConnect
Post Previous" Hore Wattio: Isticmaalka sirta korontada ee guriga
Post Next Bentley ProjectWise, waxa ugu horeeya ee aad u baahan tahay in la ogaadoNext »